Ndiani Anoshandisa Twitter? | Martech Zone
Ndiani Anoshandisa Twitter?
Chipiri, May 12, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nhasi ndaive panelist paBusiness Growth Institute yeIndianapolis Chamber of Commerce. Ruzhinji rwaive rwakabatikana, zvekuti maawa maviri ekutsanangura kushambadzira uye kushambadzira kwepamhepo yaive tad zvishoma ine hukasha.
Susan Matthews weBorshoff (a inotungamira yekumaka uye yekushambadzira agency mu midwest) uye ndiri kuenda kunotevera kuti tione kana tisingakwanise kuisa pamwechete musangano wekuenderera mberi nekubatana uye kupindura zvizere kune zvese zvikumbiro.
Sezvo nekutaurirana kwese kwekushambadzira uye zvemagariro midhiya, iyo hurukuro yakasvika padivi-yakateedzerwa kune Twitter. Ndakabvunza mibvunzo inotevera:
Vangani vanhu vanoshandisa Twitter kune bhizinesi ravo? Maoko mashoma.
Vangani vanhu vasingazive chinonzi Twitter? Maoko mashoma.
Vangani vanhu vasingazive kuti chii Twitter asi vanonyara kuzvibvuma? Vazhinji vanowedzera kutya.
Panguva ino, vanhu vaviri vakataura pamusoro pekutanga kushandisa Twitter. Izvo zvakatevera yaive runako runonakidza rant nevanhu pahuwandu hwe ruzha pa Twitter maringe neruzivo runobatsira. Ini ndinobvuma… uye yakafuridzira chati inotevera yekuputsa-pasi kwevashandisi veTwitter:
Cherechedza: Kana iwe uchida kupokana nekururama kweaya manhamba, ndapota verenga yangu Disclaimer.
Sezvo ndashandisa Twitter kwemakore mashoma apfuura, ini ndinotenda iyo svikiro yeruzivo rwandinokwanisa kuwana. Ndinofunga Twitter inogona kushandiswa zvine mutsigo kumabhizimusi zvakare - asi iyo ruzha rweruzha ruri kuwedzera kurira.
Kune mutsva muTwitter, iyo ruzha inogona kuvhara nzeve. Zvichida ndosaka Nielsen akaona akawanda matsva Vashandisi veTwitter vachisiya basa nekukurumidza. Pakutanga, vamwe vakafunga kuti vashandisi vanga vachisiya dandemutande uye vachienda kune zvinoshandiswa, asi Nielsen anga achigadzirisa zvinyorwa zvavo uye aratidza kuti kuchengetwa kwevashandisi vatsva ichiri nyaya hombe.
Tags: Kushambadzira Technology RadioSocial Media Marketing
Bhizinesi reSocial Networks
Kucherekedza kunofadza kwakadaro!
Twitter iri kukura muAustralia pamwero unoshamisa, uye takakurukura zvakawanikwa naNielsen nguva pfupi yadarika.
Nguva icharatidza kuti handina kururama kana neimwe nzira ………. zvisinei ini ndinonzwa kuti avo-vamwechete kana kuti vashandisi 'toyi' vatori vechikamu veSocial Media, vanokodzera zvirinani kune Yangu Space, Facebook, nezvimwe.
Mubatanidzwa weYakabatanidzwa Mu Twitterers inotipa inopfuura yakakwana Prospects …………….. inobatwa nehunyanzvi.
BTW Douglas (zvichirehwa nenzira yakanaka kwazvo) handina kuwana zita rako chero kupi saka ndanga ndisingazivi kuti ndiani akanyora ruzivo rwakadai uye nehunyanzvi.
Shamwari dzangu dzese dzinoseka iwe usingawane zita rangu chero kupi zvako… vaneta nekunamwa zita rangu POSE. 🙂
Kuve nekutarisa kwakanaka kwakatenderedza saiti yako Doug …………. uye pechipiri kutarisa peji yekumhara …………. Zviripachena ndiri BOFU!
Ndinofunga uchakoshesa izvi: -
Twitter ndiyo kutanga kweWebhu 3.0? http://budurl.com/whpm